Ahoana no fomba mamorona fanononana in OneNote for Mac? - Onenote
Tena > Onenote > Onenote template mac - ahoana no hamahana
Ahoana no fomba hamoronana modely amin'ny OneNote for Mac?
Mamorona modely amin'ny OneNote for Mac
Eny misy.Hametrakanaoty izay tianao hampiasaina amôdely. Tsindrio havanana nypejyary safidio ny Set as DefaultEndrika. Hipoitra ny boaty fifanakalozan-kevitra ho fanamafisana.9 Jul 2019
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny manamboatra ny planneranao manokana izay efa nataonao tsindrio eto ary avy eo omeo anarana avy eo dia manaova kahie dia mandeha fotsiny aho amin'ny plannerako ary manana faritra izahay ary miantso an'ity: modely. Lavorary! ary ny takelaka voalohany no ho an'ny iray isan'andro.
Azonao atao koa ny manamboatra ny lokon'ny planner raha tianao. Hampiasa io loko io ihany aho izao. Manoro hevitra anao aho ny hametahana tsipika fitetezana, manome torolàlana anao fotsiny izy io, ka hanomboka amin'ireo boaty tsotra indrindra izahay, izay ny asa aman-draharaha amin'ny fiainana, ny adidy an-tsekoly, ny asa asa sns
Ireto fotsiny ireo telo manan-danja indrindra rehefa mandeha mianatra ianao, miasa ary manana fiainana ary avy eo dia azonao atao daholo izy telo raha miasa fotsiny ianao ary manao ny asa sy fiainana fotsiny dia azo ovaina fa afaka manao izay tianao ianao manome anao toro-lalana tsotra fotsiny aho ka roa ihany no hataoko. Hanomboka amin'ny fanaovana sary isika ary avy eo amin'ny peniko izay ananako eto, ka alao antoka fa ity penina ity no farany nokasihinao ary avy eo mandeha amin'ny endrika ianao ka manomboka amin'ity endrika ity no hanombohana eto ary izahay dia tsotra kokoa noho izany. . Tsy lavorary izy io, azonao atao ny manamboatra an'io fotsiny, ny sisa ataonao dia ny manindry eto ary azonao atao ny manamboatra azy io araka ny itiavanao azy.
Hataoko somary lehibe kokoa koa io amin'ny fanarahana ireo tsipika. Izao dia tsindrio eto ny sisiny ary soraty ny anaran'ny boaty mba hohamaintisiko izy, ny tiako kokoa dia ny mametraka boaty mainty sy soratra fotsy ary raha tianao ny hanao izany dia manoro hevitra anao aho ny hamorona toerana eto koa, ka toa tsara kokoa toy ny boaty fa tsy manasongadina ary aleo mametraka ny habeny 18, angamba eny, tsara izany ary azonao atao koa ny manova ny endritsoratra, angamba apetrako ity. Ie, ary eto ianao vao manao azy io, eny, efa tena tsara lavitra izao, dia hanao ny andalana isika ka andao mankany amin'ny tsipika drawshapes ary tsy tokony ho tonga lafatra izany, tsy voatery ho marina ianao satria raha aforeto kely izy ity dia afaka manamboatra kely fotsiny ianao ary avy eo manova ity eto, rehefa tonga ny mandika, mandika ary mametaka ity planneranao ity dia namanao ka izao dia mamonjy fotoana betsaka kokoa ianao, izay aleoko manao toy izay mamorona ity boaty marina rehetra ity foana dia handika sy hametaka azy fotsiny mba hanananao an'ity fitaovana ity ary handehandeha manodidina ity boaty ity fotsiny.
Atsipiko io ka ho mora kokoa amiko ny miasa ary adikao apetaho fotsiny izy io mba hanananao ny boaty marina eto ary hanova ny anarany fotsiny ianao, ka amboary ireo lahasa ary hitanao fa izy ireo somary tsy manara-penitra. Tsara izany, amin'izao fotoana izao dia hamorona ireo boaty ireo fotsiny isika avy eo ary manamboatra azy ireo indray. Ankehitriny isika dia handeha hanangana ny boaty mitovy amin'ny anankiray koa ireo handeha ho ao an-tampon'i laharam-pahamehana telo andro ity fotsiny aho dia nataony indray in.
Ny boaty manaraka hataontsika dia ny boaty fanakanana fotoana ka mandehana ampidiro ary hivezivezy eto amin'ity latabatra ity aho hampiasaina toy izao, manomboka amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 12 hariva aho. Ka dia hamafana kely kokoa ity faritra ity aho mba hanananao toerana hanoratanao ireo andraikitra natokana ho anao, izao vao hanao boaty izahay - afaka mahita mazava kokoa ianao ka ny zavatra hataontsika manaraka dia ny maraina mahazatra sy ny boaty fanaon'ny alina, raha manana karazana fanazaran-tena tianao hananana boaty fanamarinana tsy miovaova ianao dia azonao ampiasaina amin'ny tabilao scoreboard izao satria vita tamin'ny takelaka an-kalamanjana izahay. ary alamino indray izy ireo mba ho tsara tarehy izy ireo ary tsy mila mieritreritra ny hameno ny banga rehetra ianao ary hahazoana antoka fa azo antoka izy ireo fa alao tanteraka ny zava-drehetra, azonao atao ny mampiasa sary na karazana haingon-trano fotsiny hamenoana ny banga. ny ohatra eto dia izao: namorona ny takelaka isan'andro isika ary amin'ny ankapobeny ny famolavolana ny takelaka isan-kerinandro ho tsara tarehy dia mitovy tanteraka, ny sisa ataonao dia ny mandika ary apetaho ireo mba ho tsotra izy ireo.
Ity dia karazana scoreboard izay azonao atao ny mandika sy mametaka ireo faribolana ireo ary manampy sary fotsiny amin'izay hasehoko anao ny fomba hanaovana ity famintinana isam-bolana ity, miampy boaty fito eto ary avy eo boaty enina midina. Azonao atao koa ny manampy faritra an-tsoratra eo amin'ny sisiny eto raha vantany vao nataonao daholo ireo takelaka noforoninay, dia hanao faritra eto aho isam-bolana, ka ... sns.
Halaiko fotsiny izao dia afaka manova ny lokon'izy ireo ianao ary avy eo rehefa te hanomboka volana vaovao ianao dia safidio eto ireo takelaka ireo, adikao ary apetaho ao izy ireo ary avy eo ny ataoko amin'ny takelaka dia omeko fotsiny mampiaraka izy ireo fa eo anelanelan'ny alahady tsirairay dia manampy takelaka isan-kerinandro aho ka alaivo kely fotsiny dia apetaho. Fantatrao izao ny fototry ny fomba fanaovana planner tsotra miaraka amin'i Microsoft OneNote, fa ahoana kosa raha manao izany ianao? Tsy manam-potoana firy hamoronana drafitra aho, omeko maimaimpoana ireo modely nomaniko ho an'ilay boaty famaritana etsy ambany izay tokony hataonao dia ny mandika azy ireo fotsiny ao anaty kahienao ary afaka manova azy ireo ho an'ilay hevitra tianao etsy ambany ary miteny amiko fa aleonao mahita ny daty misy anao? ny maraina na ny hariva teo aloha, liana be aho raha tianao ity lahatsoratra ity, omeo ny bokotra mitovy famandrihana fitiavana, zarao amin'ny namanao izany ary hiresaka aminao tsy ho ela aho ~ ciao ~ :)
Misy modely ho an'ny OneNote?
OneNotemiaraka amina pejy namboarina maromaroiombonana, ao anatin'izany ny lisitry ny pejy haingon-trano, ny drafitra ary ny lisitry ny To Do. Raha tianao dia azonao atao koa ny mamorona ny pejinao manokanamôdelyna ampanjifaina izay efa misy. ... Izany no antonyModely OneNoteazo ampiharina amin'ny pejy vaovao tsy mbola misy naoty.
Amin'ity Ehlert & Associates Teknolojia fiofanana momba ny teknolojia isam-bolana ity, hijery ny famoronana modely pejy natokana ho an'ny OneNote izahay. Okay ka nanokatra OneNotenotebook aho ary hanasongadinana fotsiny ny firafitr'ity kahie ity, kahie iray ao an-dakilasy iray manontolo ary manana fizarana ho an'ny programa tsirairay momba izay taranja Weteach natomboko tamin'ny fanaovana fizarana ho an'ny Excel ary fizarana iray ho an'ny Word ao amina fizarana iray. ho an'ny PowerPoint ary avy eo ny pejy izay ao amin'ny fizarana Excel amin'izao fotoana izao dia ho an'ny kilasy tsirairay. Mariho fa tsy manana kaontenera misy firaketana rakitra ao an-dakilasy aho. Manana pikantsary fampahalalana avy amina antontan-taratasy lehibe kokoa momba ny kilasy aho ary manana naoty izay misy naoty lesona ary avy eo rehefa mijery ireo fiasa sy raikipohy manaraka dia manana rafitra mitovy ihany izy ireo ary manana kilasy Excel maromaro kokoa ho an'ny Paste izahay. ary miverina amin'ny fizarana Word aho ary ho an'ny teny voalohany dia manana rafitra mitovy amin'ireo rakitra natsipy anaty pikantsary ny fampahalalana avy amin'ny antontan-taratasy lehibe kokoa aho ary ireo note-pianarana sy PowerPoint dia mbola tsy nanampy pejy akory, fa hanana ny rafitra mitovy mihitsy, ka ndao hojerentsika ny hevitra maodely pejy iray mba hahamora kokoa ny manampy pejy amin'ireo faritra ireo amin'ny alàlan'ny fananana ity rafitra ity amin'ny toerana misy azy ary amin'ny fotoana iray dia hamonjy ahy ary ho fantatro ihany koa izay rafitra andrasana ao amin'ny OneNote afaka Malalaka be ianao hahafahako manipy naoty na aiza na aiza, fa ny hevitra eto dia izaho dia tiako ny pejy tsirairay hanana rafitra namboarina, ka alohan'ny hamoronako ny môdeliko manokana dia misy maromaro amin'izy ireo natsangan'i Microsoft ka ianao km ght te-hanandrana ireo, arakaraka ny mety hataon'ny kahie momba ny iray amin'ireto zavatra ireto, ny zavatra tadiavinao dia tsy mila manamboatra iray akory ianao fa asehoy fotsiny hoe ho avy hatrany aho ary tsindrio ny bokotra pejy vaovao ary kitiho ny zana-tsipìka mainty eo ankavanan'io ary safidio ny maodelin-pejy ary manana sokajy vitsivitsy ato ianao izay omen'ny Microsoft daholo.
Tsindrio fotsiny ny sokajy Business ho anao ary misy ireo modely pejy izay misy ifandraisany amin'ny tetikasa na ny dikany. Ka raha te hanana pejy topimaso momba ny tetik'asa aho dia afaka manindry azy fotsiny ary mahita fa nampidirina ny modely pejy, ka io no hevitry ny maodelin-pejy - misy naoty na naoty efa napetraka, misy sary afara vitsivitsy sy ny toy izany mba ho hitanao fa soso-kevitra fotsiny dia ny fomba ahafahako mamorona pejy topy maso ny tetik'asa, saingy misy rafitra vitsivitsy eo akaikin'ny ramanavy. Mazava ho azy, ny topimaso momba ny tetikasa dia tsy misy ifandraisany amin'ny kahie ao an-dakilasiko ka tsy mety amiko, fa afaka manandrana ny hafa aho ary mankany amin'ny sokajy Planner manandrana lisitry ny zavatra tsotra atao Mariho fa nanova ny pejy nojereko hivoaka ity pejy ity, tsy hanavotra ity pejy ity izy raha tsy omeko anarana hafa izay karazana lazaiko hoe eny tiako hotehirizina izany fa fantatrao izay tsy tiako tazomina na tiako holazaina koa fa mahafinaritra izany raha- Ataovy lisitra izay manome ahy boaty boaty hanampiana entana, manana ambadika kanto izy nefa tsy misy ifandraisany amin'ity kahie ity intsony, ka tsindrio havanana ity pejy ity ary hamafana izany ary izay tiako hatao dia tiako ny fanakatonana ny varavarankely môdely vetivety dia ny fitehirizana ny iray amin'ireto pejy ireto ho modely mety amiko izao fa raha hatao ankapobeny kokoa dia hamboariko ny pejy mba hijerena tsara ny endrik'ilay pejy. ampidiro tsy misy naoty vao tsy ela akory izay, ka hampiasaiko ity pejy ity miaraka amin'ireo fiasa sy raikipohy ho maodely.
Ankehitriny te-hihazona ity pejy ity aho, ho an'ny kilasy misy ankehitriny izany ka hanao kopia iray avy eo aho dia tsindrio havanana ilay pejy ary safidio ny Hetsika na Adika ary afindrako ho any amin'ilay faritra na copie io ihany ny faritra Excel iray halako azy ka manana duplicate marina aho izao, saingy ity no hatsangako ho modely ka ho raisiko aloha ny lohateny ary hamboariko ho pagetemplate kilasy fotsiny izany mazava be, ity no pikantsary iray hofafako ny pikantsary, fa hanampy an-tsoratra eto aho milaza fa hasiana pikantsary miaraka amin'ny fampahalalana ankapobeny avy amin'ny antontan-taratasy famaritana an-dakilasy mba hahafahan'ny olona mandray fotsiny an'io naoty io ary hamafa azy ary soloina amin'izay lazaiko marina aminao fa azonao soloina ho an'ny naoty an-dakilasy. Hofidiko fotsiny io teboka bala io ary lazao fa manampy an-tsoratra naoty an-dakilasy mifandraika ary avy eo eto ho an'ny rakitra an-dakilasy. Hofafako fotsiny ny tsirairay amin'ireo kamban-tena, fa avelako eo amin'ny toerany ilay naoty, ary ity dia ho maodely tsara hanampy ahy hamorona pejy fanampiny miaraka amin'ilay firafitra mitovy, ka rehefa namolavola azy aho dia ampiasaiko ho modely. mitahiry ka rehefa voafantina dia mankany amin'ny pejy vaovao aho ary tsindrio ny zana-tsipìka mainty ary amin'ity indray mitoraka ity dia mankanesa any amin'ireo modely pejy na dia efa eo am-pototry ny farany ambany aza ianao dia aza mahatsikaritra raha tsy fantatrao fa eo izy, fa tahirizo ny pejy ankehitriny ho modely ka ilay pejy tadiaviko izao dia hitahiry azy ho modely mba hahafahako manindry azy mba hanomezako anarana azy ilay pejy kilasy anaram-bolo ary ho hitako ity napetraka ho modely default ho an'ny pejy vaovao ao amin'ny fizarana ankehitriny.
Tsy mila manao intsony aho izao, ny zavatra hitranga dia ny mahazo sokajy vaovao eto ho an'ny maodeliko manokana ary azoko atao ny misafidy azy io amin'ny fotoana rehetra tiako hampiasa azy ireo tahaka ny nataoko tamin'ireo modely avy tany Microsoft, fa rehefa Ataoko rehefa manindry pejy vaovao aho, fa tsy ny zana-tsindry ny bokotra pejy vaovao izay manome anao pejy foana, naseho ahy io môdely io ho an'io faritra io ho an'ny fizarana excel fa afaka manao izany aho ary tsindrio ny tahiry, noho izany mariho izao fa eto ambany eo ambanin'ny 'fisafidianana pejy misy modely modely default' no maodeliko, izay ho an'ity fizarana ity ihany izao, saingy tsy misy ifandraisany tanteraka amin'ireo kilasiko hafa koa, ka handeha ho any amin'ilay faritra misy ny teny aho ary ho avy eto mba hanamarihana dia milaza fa tsy misy maodely default ho an'ity faritra ity satria ny pejy banga no azonao rehefa tsindrio pejy vaovao, fa tonga eto aho ary mifidy pejy kilasy. Raha ny tokony ho izy dia voasokajy amin'ny sokajy misy azy ireo izy ireo, ary mariho fa misy ny sokajy 'My Templates' ankehitriny satria notehiriziko ny maodeliko manokana ary soa ihany fa eo an-tampony. Tsy nalahatra araka ny abidia ireo, ka hasehoko izany araka ny filaharan'ny fisehoan'ireto sokajy ireto, izay mety ho somary sarotra ihany ny mahita azy, saingy misy pejy misy kilasy eo akaikin'ny tampony satria farafaharatsiny ireo noforoniko dia ao amin'ny ambony amin'ny lisitra, ary hanao toy izany koa aho amin'ny PowerPoint.
Tonga aho ary nametraka ny maodelim-bidy ho an'ity fizarana ity ho toy ny pejin-dakilasy ary hanao zavatra toa izany koa aho raha nanampy fizarana programa fanampiny rehefa mandeha ny fotoana dia manidy ny baravarankely modely aho ary miverina any Excel ary ankehitriny nanampy an'ity pejy ity fantatrao aho naka tahaka azy aho dia mila tsy mandeha intsony aho fa tsindrio fotsiny ary tsindrio havanana ary hamafana an'io izao dia miverina amin'ny voalohany isika. Ity ny pejy fanombohako voalohany miaraka amin'ireo naoty sy antontan-taratasy ankehitriny. Ireto ny fiasa sy ny raikipohy.
Ary vonona aho ny hanampy ny mpianatra, ka tsindrio eo amin'ny New fotsiny Page ary jereo fa mampiasa ny vaovao pejy template. Tonga eto fotsiny aho ary misintona azy amboniny ary manorata ny takelaka izay mety ary avy eo afaka mandroso aho ary manomboka manampy ireo rakitra Notes sy Class Notes mba hahafahako mankany Word ary afaka manindry pejy vaovao aho ary misy ny modely kilasy sy izaho Andao hiroso ary hilaza fa te handroso ary hamorona ny modely sy ny fomba. Oops iray ary any izahay no mandeha ary mitovy ihany ny zavatra mitranga rehefa mampiditra pejy vaovao ao amin'ny PowerPoint aho ary, isaky ny mamorona faritra vaovao ianao dia pejy tsy misy lohateny ka hamafana izany aho ho an'ny môdely myclass.
Izany no hevitra mamorona modely pejy vaovao sy naoty manendry azy io ho toy ny pejy tsy misy pejy ho an'ny fizarana iray na maromaro, ary avy eo ampiasainao fotsiny ho an'ireo fizarana ireo hamorona pejy fa rehefa banga tanteraka izy ireo, dia omeo ilay rafitra izay nataonao te-hanaraka hianatra bebe kokoa momba ny fianarantsika, mitsidika anay ao amin'ny wwlp.com
Ahoana no ahitako modely ao amin'ny OneNote?
Manampy aOneNote Template
Tsindrio ny tsofoka Insert ao amin'ny Ribbon. Avy eo, kitiho ny Pejyiombonanabokotra Misafidiana ny pejy ao amin'ny menioiombonanasafidy. Avy amin'nyiombonanapane, kitiho ny sokajy iray hanitarana ny lisitry nyiombonana.8 Mey 2019
Maninona aho no tsy mahita modely ao amin'ny OneNote?
Ao amin'ny tabilao Menus, kitiho ny menio Format ary mampiakatra menio mirotsaka izy io. Tsindrio avyEndrika..., ary nyiombonanany varavarankely dia hisidina eo amin'ny zorony farany havanana. Afaka misafidy mamorona vaovao ianaomôdelyamin'ny tenanao na misafidiana iray avy amin'ny default defaultmôdelypane panel
Nampiasa OneNote aho nandritra ny taona vitsivitsy izao. Ny antony lehibe indrindra dia ny fandaminana bebe kokoa. Hitanareo, mieritreritra foana ireo asa tsy maintsy ataoko aho.
Manana hevitra momba lahatsoratra vaovao aho, mila manoratra ny anaran'ny fampiharana vaovao izay vao notantarain'ny olona tamiko. Nangoniko tamin'ny toerana samy hafa ireo ary tsy nisy nifangaro. Maro amin'izy ireo no nanjavona tao anaty lavaka mainty.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hizara aminao ny toro-hevitra sy tetika OneNote ary ny fomba tiako hampiasana azy. (Mozika mitohy) Alohan'ny hanombohantsika, misaotra haingana an'i Skillshare nanohana ny lahatsoratra androany. Skillshare dia sehatry ny fianarana misy taranja tsara be dia be.
Ary manana rohy manokana ho anao aho izay manome anao fidirana premium maimaimpoana mandritra ny roa volana. Afaka mahita izany ianao amin'ny famaritana an'ity lahatsoratra ity. Fa hiresaka bebe kokoa momba azy io hatramin'ny farany aho ka mahareta.
sary ratsy akord3232.exe
Andao hiroso amin'ny toro-hevitra eto amintsika izao. David Allen, mpanoratra ny Get Things Done. Boky tsara tokoa, raha ny fanazavana, ary tena amporisihiko ianao raha liana.
Milaza izy fa manana hevitra ianao ary tsy mifikitra amin'izany. Noho izany dia mila mitady fomba hanoratana sy hitahirizana ireo hevitra momba ny endrika ivelany isika hahafahantsika mifantoka amin'ny fanatanterahana ireo zavatra ireo. Eto no misy ahy OneNote.
OneNote dia kahie niomerika, saingy mihoatra lavitra noho izany. Azoko antoka fa hifanaraka amiko ianao amin'ny faran'ity lahatsoratra ity. Andao mankany amin'ny toro-hevitra momba ny famokarana OneNote.
Laharana voalohany, mampiasa hierarchies handaminana ny tenanao. Ny endri-javatra tsara ao amin'ny OneNote dia ny ahafahanao mamorona rafitra firakitra manokana. Misy ambaratonga telo lehibe, ny haavon'ny avo indrindra dia ny kahie, toy ny kahie ara-batana ihany, afaka misy pejy maro izy ireo.
Hevero ho toy ny toko ao anaty boky izany. Ary farany misy ny lafiny. Ireo dia misy ny naotinao tena izy.
Andao hatao hoe mamorona kahie ho an'ny resinao rehetra izahay. Azontsika atao ny manindry tsara ary misafidy New Notebook na kitiho. kitiho ampio ny kahie eto ambany.
Ireo fizarana ao amin'ity kahie ity dia mety ho hafa mba hahafahantsika mamorona faritra ho an'ny vao manomboka, ny iray ho an'ny taranja lehibe, ny iray ho an'ny lovia tsy mihinan-kena, ny iray ho an'ny tsindrin-tsakafo, sns. Manana ny hevitra ianao. Ao anatin'ireo fizarana ireo dia manampy ireo pejy misaraka ho an'ny tena fomba fahandro.
Eto izahay dia manana fomba fahandro ho an'ny burger holatra dia. Manana ny akora, ny torolàlana izahay ary afaka manampy sary ary mampifandray mihitsy aza izay niavianay ny fomba fahandro. Ankoatr'ireo resipeo ireo dia mazàna aho manana kahie ho an'ny lahatsoratra misy fizarana samihafa arakaraka ny fivoaranao, toy ny ati-doha, ny fikarohana na ny fanoratana.
Ary manana kahie ho an'ny zavatra manokana toy ny lisitra fiantsenana, fialan-tsasatra sns. Raha mila ambaratongam-pahefana ambony ianao dia afaka manangona fizarana maromaro ao anaty vondrona iray, azonao atao ny misintona ireo fizarana ao amin'ilay vondrona. Ny sosona hafa azonao atao dia ny zana-pejy.
Raha hampiasa azy ireo dia mila manana pejy roa farafahakeliny ao anaty fizarana iray ianao. Ka andao holazaina eto fa manana pejy miaraka amin'ireo naoty nihaonako avy amin'ny Excel Conferences aho, afaka mamorona zana-sokajy Age miaraka amin'ireo naoty isaky ny fizarana, noho izany dia manana sombin-javatra antsoina hoe Session Notes Excel Conference Bulgaria sy pejy kely isaky ny fivoriana aho. Tsindrio raha hamorona pejy kely Mandehana mankany amin'ny pejy tianao hivadika subpage ary safidio Make Subpage Make.
Io no hampiditra ny lohateny. Azonao atao aza ny manana sosona hafa amin'ilay takelaka milaza fa Subpage of a Subpage. Tsy dia mampiasa an'io matetika aho, fa raha manana naoty be dia be ianao ary mila firafitra amin'ny antsipiriany, dia mety hanampy be azy ireo izany.
Raha fintinina, ireto no ambaratonga samihafa amin'ny hierarchy azonao atao. Notebook, vondrona fizarana, fizarana, pejy, iray ambany, roa ambany. Atombohy fotsiny amin'ny rafitra izay misy dikany aminao, azonao atao foana ny manova azy na manampy azy avy eo.
Laharana faharoa, ampiasao ny tag mba hahitanao izay ilainao. Ny tag dia fomba tsara hanasokajiana sy hametrahana vondrona naoty izay tsy ao anaty kahie na fizarana mitovy amin'ny kahie hevitra momba ny lahatsoratra ankapobeny, amin'ity tranga ity ho an'ny Power Query, izay ananako naoty hianarana M-basics. Andao lazaina fa zavatra tiako hoheverina ho vita tsy ho ela ity.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny mari-pamantarana dropdown Ity Fanamarihana etsy ambony ity, dia afaka misafidy tag misy default isan-karazany aho hanampiana ireo naoty na ampahany amin'ireo naoty. Azoko atao ny manisy marika an'io miaraka amin'ny Remember for later, ka aza hadino izany. Ao amin'ny kahie hafa ho an'ny fikarohana nataoko dia manana pejy aho hijerena ity app ity ho an'ny mpamaky kaody.
Azoko atao ny manisy marika ity fanamarihana ity miaraka amin'ny tag mitovy, Mampahatsiahy anao ny andro iray ihany any aoriana, izany hoe na dia amina ambaratongam-pahefana hafa aza izy ireo dia mbola voaangona ary mora ny mahita ny naotinao manaraka avy eo.
Andao lazaina fa te-handinika ireo naoty rehetra voamarika hoe Save for Aba ianao, ny sisa ataonao dia tsindrio ny kisary fikarohana eo ankavia eto, avy eo na tsindrio fotsiny ny bara fitadiavana ary safidio ireo marika voalaza eto etsy ambany. Na soraty fotsiny izay tadiavinao ary safidio ny andro tadiavinao. Hahazo ny lisitry ny naoty rehetra misy ity tag ity ianao.
Azonao atao ny mampiasa ireo mari-pamantarana mahazatra, saingy mamporisika anao aho hamorona ny rafitry ny tenanao manokana amin'ny alàlan'ny taganao manokana ihany koa. Ny sisa ataonao dia tsindrio Mamorona Tag vaovao eo ambany eto, ary azonao atao ny manome anarana azy ary misafidy sary famantarana ho an'ny Tags toy ny azonao atao amin'ny OneNote taloha. Ny vaovao dia ampidirina eto ambany foana, ka aza mandehandeha mitazona ny isan'ny marika manokana.
Mampiasà marika mba hanasokajiana naoty. Betsaka ny fampiasana ny tag, ampiasao fotsiny araka izay ilainao. Ohatra, ndao atao hoe te-hanaraka ny lahasa notendrenao ho an'ny mpikambana ao amin'ny ekipanao ianao na hampiasa azy ireo hanasongadinana ireo ampahany manan-danja ao amin'ny naoty fandalinanao.
Manamora ny fitadiavana izay ilainao izy ireo, rehefa ilainao izany. Laharana fahatelo, hevitra eto ambany miaraka amina taratasy miraikitra amin'ny toerana rehetra. Isaky ny mivoaka sy manodidina aho, dia nanamboatra zavatra tsy tiako hohadinoina tamin'ny sombin-taratasy iray, avy eo na very izy ireo na nandany fotoana be hikarohana ny lamosiko, tsy misy hafa.
Nahita Sticky Notes aho. Ny Sticky Not's dia tafiditra ao amin'ny fampiharana OneNote amin'ny telefaona. Ka raha te hanoratra zavatra haingana fotsiny aho dia manokatra ny fampiharana OneNote ary manindry ny bokotra, Sticky Notes eto ambany, ary manomboka manoratra.
Azoko jerena eto daholo ihany koa ireo Sticky Notes nangoniko teo aloha, ka rehefa miverina any amin'ny birao aho ary te-hahita ireo naoty ireo dia handeha ho any amin'ny app Sticky Notes aho. Rindrambaiko natsangana tao anaty Windows 10. Mba hahatongavana any, tsindrio ny bokotra fanombohana ary kitiho miloko ary ho hitanao ny fisehoany eto.
Ho hitanao fa rindrambaiko misaraka amin'ny solo-sainao na amin'ny solosainao findainy io, raha ampahan'ny fampiharana OneNote amin'ny telefaona findainao izy io ary ampifanarahana ho azy mba hanananao ny naotinao miaraka aminao foana, na aiza na aiza no nitondranao azy ireo. Laharana fahefatra, esory ny sary amin'ny sary. Seho iray lehibe hafa ny Optical Character Recognition, na OCR, ny sary. Manana tombony roa lehibe io, isa voalohany, azonao atao ny mandika lahatsoratra avy amin'ny sary ka tsy mila manoratra azy amin'ny tanana ianao.
Ohatra, nandika ny pikantsary tao amin'ny naotiko aho. Rehefa tsindrio havanana aho dia azoko atao ny maka tahaka ny sary. Afaka manokatra pejy vaovao aho ary maheno ny lahatsoratra nalaina tamin'ny sary.
Ny tombony faharoa ampiasako manokana dia ny ahafahako mitady lahatsoratra amin'ny sary. Matetika aho manangona vaovao marobe avy amin'ireo lahatsoratra izay raisiko an-tsoratra, manao sary an-tsokosoko sy sary koa aho. Rehefa mitady zavatra manokana manokana aho avy eo, dia ampiasaiko ny asan'ny fikarohana.
Ny endri-javatra OCR dia mikaroka ihany ny lahatsoratra amin'ny sary ary mampiseho ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'izany, ao anatin'izany ny sary. Laharana dimy, mifantoka amin'ny Immersive Reader. Endri-javatra lehibe tiako hampiasaina rehefa tena te-hifantoka amin'ny lahatsoratra iray na ho an'ny famerenana amin'ny laoniny ny Immersive Reader.
Tafiditra amina rindranasa marobe toa ny Word, Outlook ary OneNote izy izao. Rehefa eo amin'ny pejy ianao, eo amin'ny zoro View, ny fanindriana Immerive Reader dia manamora kokoa ny famakiana azy. Azonao atao ny manova ny toerana misy ny lohahevitra momba ny haben'ny lahatsoratra sy ny loko araka izay tianao.
Eto no ahafahanao manova ny endritsoratra koa, ary ny mahaliana dia ny Comic Sans, endri-tsoratra izay mety tsy dia mahasarika amin'ny sehatra matihanina, nefa mety amin'ny ankizy, ary miendrika G izany no ianaran'ny ankizy manoratra any an-tsekoly. Azonao atao koa ny mampiasa an'io mba hampiharana famakiana miaraka amin'ny zanakao. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny bokotra filalaovana etsy ambany ary avelao hamaky anao mafy ny lahatsoratra.
Ianaro ny fomba famakafakana raha mendrika hividy amin'ny fananana ny trano iray amin'ny fanisana ny sandam-bola. Ny fanamafisam-peo dia mamela anao hanova ny hafainganam-pandehan'ny feo ary misafidy feo vavy na lahy. Manangana modely Excel izahay.
Izaho manokana dia mampiasa OneNote. Saingy misy asa maro hafa izay mety hanampy be arakaraka ny filanao. Ohatra, azonao atao ny manintona endrika amin'ny tanana ary avy eo mampiditra ranomainty amin'ilay endrika, ary ny OneNote dia hanova azy ireo ho endrika misy tsipika mahitsy sy zorony madio afaka mamadika ny asa soratanao ho lahatsoratra soratany ihany koa, Tsy nino aho satria manana sora-tanana mahatsiravina, mahavita manova ny ahy aza izy, ampiasao aloha ny safidin'ny lasso hisafidianana izay tianao hovaina, avy eo tsindrio fotsiny ny Ink ho Text eto, tsy ampiasaiko matetika ity endri-javatra ity satria haingana kokoa ny fanoratako azy, fa mety hahasoa raha tianao ny soraty amin'ny tananao ireo naoty nataonao.
Azonao atao aza ny mampiasa OneNote amin'ny olan'ny matematika. Azonao atao ny manoratra fampitahana, mampiasa ny safidin'ny lasso hisafidianana azy, avy eo tsindrio ny Math. Tinta ho Matematika etsy ambony dia ahafahanao mamadika azy amin'ny lahatsoratra voatonta.
Saingy tsy izany ihany, azonao atao ny manontany, tsindrio safidy iray ary hamaha ny fampitoviana. Ary raha liana ianao, dia azonao atao ny mampiseho ny zafikelikely ny fomba famahana azy. Tsara ihany, sa tsy izany? Aza miteny amin'ny mpampianatra anao.
Misy kinova samihafa amin'ny OneNote toy ny One na 2013 na OneNote 2016. Fa ny kinova ofisialin'ny fampiharana dia antsoina hoe OneNote ihany. Misy amin'ny Windows izany. ary koa ho an'ny Mac Plus, maimaim-poana izany ary mandrindra amin'ny telefaonanao rehetra, ka hitanao fa misy fomba rehetra ahafahanao mampiasa OneNote mba handaminana sy hamokatra bebe kokoa.
Raha manana endri-javatra tianao indrindra ianao dia zarao aminay etsy ambany, ary raha manana zava-baovao hizarana amin'ny OneNote izay tsy norakofako tamin'ity lahatsoratra ity dia zarao koa eto ambany. Raha toa ahy ianao ka te hahatratra bebe kokoa ao anatin'ny fotoana fohy dia mamporisika ny handray ireo taranja famokarana amin'ny Skillshare aho. Skillshare dia manolotra fampianarana sy lohahevitra manentana an'arivony an'arivony, ao anatin'izany ny famokarana, ny fahaleovan-tena, ny fahaizana teknika toy ny fahaizan'ny birao, sy maro hafa.
Ny iray amin'ireo taranja farany nataoko tao amin'ny Skillshare dia ny famokarana tsotra, ny fomba fanaovana bebe kokoa amin'ny kely kokoa. Ity fampianarana ity dia nahatonga ahy hieritreritra indroa momba ny lisitry ny zavatra tokony hatao isan'andro. Tsapako fa tsy momba ny zava-bita vitako tao anatin'ny fotoana voafaritra io, fa momba ny fanapahana izay zava-dehibe, ary tsy mora izany, satria zava-dehibe ny zava-drehetra raha vao jerena.
Tena tiako ireo fitaovana, nozaraina tamin'ity fampianarana ity mba hanampiana ahy. Raha liana amin'ny handray an'ity fampianarana ity ianao na amin'ny kilasy c an'arivony maro ao amin'ny Skillshare, kitiho ny rohy eo amin'ny boaty famaritana etsy ambany mba hahazoana mpikambana premium maimaim-poana mandritra ny roa volana izay manome anao fidirana tsy voafetra. Aorian'ny roa volana, ny famandrihana isan-taona dia mitentina latsaky ny $ 10 isam-bolana, izay mahatonga ny fianarana fahaiza-manao vaovao tena mora zakaina, ary antenaiko fa ity lahatsoratra ity dia nanome anao hevitra momba ny fampiasana ny OneNote afaka manatsara ny fizotranao isan'andro.
Raha tianao izany dia omeo ankihibe - te hianatra fahaiza-manao vaovao ianao. Ary ho hitako ianao amin'ny lahatsoratra manaraka. (mozika upbeat)
Misy modely pejy ao amin'ny OneNote for Mac?
Ny ekipan'ny fampandrosoana OneNote for Mac dia nanambara fa nampihatra ny endri-drafitra pejy OneNote tao amin'ny kinova OneNote ho an'ny Mac izy ireo. Ity ny loharano: https://onenote.uservoice.com/forums/327165-onenote-for-mac/suggestions/6653158-mac-page-templates
Ahoana ny fomba hamoronana modely ho an'ny menio OneNote gem?
Ireto misy môdely fampiasa matetika alaina amin'ny fampidinana. Ny mpanampy Menu Gem dia tsy manohana modely manaraka, Mitadiava modely ho an'ny Menu Gem. Ahoana ny fametrahana ireo modely (misintona avy amin'ny tranonkala) ao amin'ny OneNote. Mamorona modely iray amin'ny vatosoa OneNote, mampihatra modely amin'ny pejy fanovana ankehitriny. Ahoana ny fomba famoronana sy fampiasana ny saha misy daty amin'ny môdely OneNote?
Ahoana no fomba hanampiako pejy vaovao amin'ny OneNote?
Isaky ny te-hanampy pejy vaovao ianao amin'ny fizarana OneNote amin'izao fotoana izao mifototra amin'ny maodelin'ny pejy voatahiry, ao amin'ny pane ankavanana, tsindrio ny zana-tsipìka eo akaikin'ny Pejy Vaovao, ary avy eo tsindrio ireo môdely pejy. Kitiho ny Templates-ko, ary avy eo kitiho ny anaran'ny modely voatahiryo.
Misy modely voaloa ho an'ny Microsoft OneNote?
Azonao atao ihany koa ny 19 misoratra anarana iombonana OneNote karama, toy ny Calendars, fandaharam-potoany, Vacation sy nandamina, Address Book, Client Portal, Business Suite, myLIFE, Personal / Professional Development, Teams, sy ny maro hafa. Ireto misy modely mety hitanao fa mahasoa: